Routers & Networking – ICT.com.mm
Tenda S108 8 Port Desktop SwitchK11,700 K7,000-41%
D-Link DIR-842-P Wireless AC1200 MU-MIMO Wi-Fi Gigabit RouterK74,700 K44,000-42%
Tenda I6 WH302A 2.4G 300M 20client Wireless High Power Access PointK52,900 K32,000-40%
Tenda I12 W330A 2.4G 300M 40client Ceiling Access PointK67,400 K41,000-40%
Tenda TEG-1016D 16 Port Gigabit SwitchK94,800 K57,000-40%
Up to 47% OFF And Free Gift
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Dual-band Wireless AC1200 (867 Mbps on5GHz + 300 Mbps on 2.4 GHz) 802.11ac with MU-MIMO Gigabit WAN and4x Gigabit LAN SDRAM: 128MB Flash:...
D-Link Wi-Fi Range Extender (IND-DAP-1620)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Wireless AC speeds of up to 1200 Mbps Dual-Band connectivity reduces interference Features D-Link Wi-Fi Mesh technology – Works with compatible routers to createamesh network...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ 8x Gigabit Ethernet ports Plug & play for instant connectivity Product Code: IND-DGS-108/E Supplier Warranty:7Days Brand Warranty: 1 Year More Ports. More Convenience. The DGS-108 8-Port...
D-Link 10‑Port Fast Ethernet Switch (IND-DES-F1010P-E)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ 8 10/100 Mbps PoE ports210/100Mbps Uplink ports 96 W PoE budget Support IEEE802.3af/at up to 30W per port to PoE compatible devices Support transmission Data/PoE...
D-Link IND-DGS-1008MP (Max PoE) 8-Port Desktop Gigabit PoE Switch
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ The DGS-1008MP 8-Port Desktop Gigabit PoE Switch is an ideal solution for small to medium businesses looking to easily connect and supply power to Power over Ethernet...
D-Link AC5300 MU-MIMO Ultra Wi-Fi DIR‑895L Router
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: D-Link 4x 10/100/1000 Gigabit LAN Ports 1x 10/100/1000 Gigabit WAN Port 2x USB ports (one USB 3.0, one USB 2.0) Tri-Band for Ultimate Coverage and Reliability...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Dual-band AC1200 MU-MIMO Scalable seamless Mesh wireless network Supports wired dedicated backhaul Smart Roaming & Steering 2×3 internal antennas for optimal range and connectivity Coverage of up...
D-Link 24-Port Gigabit Unmanaged Switch DGS-1024C
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ 24 Gigabit LAN ports for high-speed wired connections Plug-and-play installation for convenience Auto-negotation on all ports Half/full-duplex, auto MDI/MDIX, and store-and-forward switching Full wire-speed data transmission Energy-efficient...
D-Link 24-Port Unmanaged Gigabit Switch DGS-1024A
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ 24 Gigabit Ethernet ports for fast network speeds Fanless design for silent operation Auto MDI/MDI-X crossover for all ports Full/half-duplex for Ethernet/Fast Ethernet speeds Supports 9,216 Bytes...